Isisekelo - The Kerry Blue Terrier Foundation
The Kerry Blue Terrier Foundation iyinhlangano engenzi nzuzo enikelwe ukukhuthaza inhlala-kahle yohlobo lwe-Kerry Blue Terrier ezindaweni zemfundo, ukutakula, nezempilo & ufuzo.
Sawubona! Uyemukelwa kwi-KBTF Community 🙂 Uma ungathanda ukuthunywa kwethu futhi ungathanda ukuxhasa isisekelo sethu sokutakula esingesi inzuzo sicela uthenge Ubulungu be-KBTF bese ujoyina nathi namuhla!
The Kerry Blue Terrier Foundation iyinhlangano engenzi nzuzo enikelwe ukukhuthaza inhlala-kahle yohlobo lwe-Kerry Blue Terrier ezindaweni zemfundo, ukutakula kanye nezempilo & ufuzo. Singabathandi bezinja, odokotela bezilwane, izifundiswa nabavikeli beKerry Blue Terrier Breed.
The Kerry Blue Terrier Foundation yinhlangano esatshalaliswa emhlabeni wonke, enenhlangano esemthethweni e-US naseCanada. Ngenkathi i-KBTF yaseCanada iyinhlangano engokomthetho ehlukile kwi-US Kery Blue Terrier Foundation, sabelana cishe ngayo yonke imigomo, izinqubo, nezinsizakusebenza eziningi, njengewebhusayithi, i-newsletter kanye nemininingwane yokuxhumana.
Indlela Esenza Ngayo
Isisekelo sisekelwa kuphela yi iminikelo ekhokhiswa intela Ngaphansi kwesigaba 501 (c) (3) se-US Internal Revenue Code, futhi inabasebenzi futhi basebenza ngamavolontiya azinikele avela emphakathini wethu emhlabeni jikelele.
The Kerry Blue Terrier Foundation (I-KBTF) iqoqa, isakaza, futhi isabalalisa imininingwane ngalowo mhlambi ukuze kusizakale abafuyi, abanikazi, kanye nabanikazi abangaba nabo, futhi ekugcineni abazale ngokwabo.
The Kerry Blue Terrier Foundation (I-KBTF) inikezelwe ekusizeni noma yimuphi uKerry oswele, kubandakanya, kepha kungagcini lapho, amaKerries atholakala kwizindawo zokukhosela izilwane noma amakhilogremu, lawo ahoxiswa ngabanikazi bawo, labo abashiywe bengenamakhaya ngabanikazi abangasekho noma abangenamandla, labo abatholwe abanye njengezilahlekile , noma yimuphi uKerry esimweni esiphuthumayo esidinga usizo.
Ezempilo Nezakhi zofuzo
I-KBTF isekela ngokuqinile ucwaningo kulezo zindawo zezempilo nezofuzo ezaziwa njengokuthi zihlupha kakhulu i-Kerry Blue Terrier, kufaka phakathi, kepha kungagcini lapho, ukuphazamiseka kwe-autoimmune, i-dysplasia ye-hip, i-hermaphroditism, i-myelopathy ekhathazayo, izinkinga ze-thyroid, ukuphazamiseka kwamehlo, kanye naleyomdlavuza avame ukwenzeka kuhlobo. Ukusekelwa kwe-KBTF kufaka izifundo zokuxhaswa kwezimali okwenziwe ngabacwaningi abahlonishwayo bezinye izinhlangano ezingenzi nzuzo, kanye nezifundo ezithokozisayo zezempilo nezenzalo noma izicelo ze-RFF (Isicelo Sokuxhasa Imali).
Kungani Kerry Blue Terrier Foundation ikhona?
Isisekelo sikhona ukuvikela inzalo kaKerries nabanikazi bazo.Izinhloso zeSisekelo zichazwe ngokuningiliziwe kithi Mission Statement. Isisekelo sifeza umsebenzi waso ngo (1) sinikezela ngemininingwane yamahhala ngokusebenzisa iwebhusayithi yayo kanye nohlu lwezindaba, (2) esiza izinja zokutakula ezishiywe ngabaninizi noma abafuyi bezimpahla, futhi (i-3) zivimbele izinkinga zofuzo zesikhathi esizayo ngokunikeza imali ngocwaningo lwezempilo & nofuzo.
Ngabe kukhona iminikelo ku-Basic tax Deductible?
Yebo. The Kerry Blue Terrier Foundation yinhlangano engenzi inzuzo yomphakathi, exhaswa kuphela ngeminikelo ekhokhiswa intela ngaphansi kwesigaba 501 (c) (3) se-US Internal Revenue Code. IRS yethu Incwadi Yokuzimisela iyatholakala ukuze ihlolwe.
Iminikelo ku-Isisekelo ayitholakali kwamanye amazwe.
Iminikelo ku Kerry Blue Terrier Foundation zaseCanada azidonswa intela.
Abanikelayo baqinisekiswa kanjani ukuthi imali izosetshenziswa ngobuhlakani?
Isisekelo sisebenzisa izinsizakalo ze-CPA eziqinisekisa ukuthi iSisekelo sigcwalisa izidingo ze-IRS ezilukhuni maqondana nokusetshenziswa kwemali ukugcina isimo sethu singakhokhiswa intela. Umongameli weSisekelo une-MBA futhi uyi-Certified Treasure Professional. Ubengumhleli obambe iqhaza kwiJourism yeCash Management futhi uphathe izigidi zamaRandi ezinkampanini zikazwelonke. Amarekhodi ama-accounting weSisekelo avulelekile ukuthi ahlolwe.
Ukutshalwa kwemali kwethu kwenziwa Izitifiketi Zediphozithi kuphela.
Isisekelo asinamalungu, yiBhodi Yabaqondisi kuphela enganxephezeliwa. Zonke izimali zisetshenziselwa ukwenza umsebenzi weSisekelo. Isisekelo asikhokhi amaholo.
Ngabe iKerry Blue Foundation izokwazi ukubakhona?
Konke kwenziwe ukuze kwenziwe lokhu. I-KBT Foundation yinhlangano yomphakathi esiza inzuzo-ibhizinisi elisemthethweni elingaphelelwa yisikhathi. Ibhodi yabaqondisi liyamangaza ukuze njalo ngonyaka i-1 / 5 yeBhodi ibe entsha, kanti i-4 / 5 inolwazi lokuqhuba iSisekelo. Lokhu kunikeza ukuqhubeka kwezokuphatha futhi kuqinisekisa ukusebenza kahle ekusaseni.
Isisekelo sixhaswe kahle imali futhi sigcina imali ebekiwe yezimo eziphuthumayo.
Ngubani ku Kerry Blue Terrier Foundation Ibhodi?
Amalungu eBhodi akhethelwe iminyaka emihlanu egxilile. Bonke bangamavolontiya futhi abanxephezelwe. Amalungu eBhodi wamanje abhalwe ku-web site:
Akhethwa kanjani amaphrojekthi ezempilo nezakhi zofuzo?
Ukuxhaswa ngezimali kwamaphrojekthi we-Health & Genetics kuzonqunywa yi-theboa rd ye-KBT Foundation. UDkt W. Jean Dodds uhleli ebhodini lethu futhi ube nesandla ekukhetheni amaphrojekthi afanele okufanele axhaswe. Ukuqokwa kwamaphrojekthi kuzokhulunywa ngakho emphakathini ohlwini lwezindaba lwe-KB-L.
Ngabe iSisekelo sisebenza kanjani nabafuyi bezitshalo?
Isisekelo sisekela futhi sisekela abalimi bakwaKerry ngokunikeza izinsizakalo zamahhala ezilandelayo:
Uhlu Lweziqondisi Sokuzala
Izincwadi zokubekwa: Uhlu lwemibuzo lokwamukela izingane
futhi Isivumelwano (Imibhalo eyisisekelo isetshenziswe amakilabhu kazwelonke okuza izinja futhi aqashelwa njengamanye amadokhumenti amahle akhona.)
Usizo ngokuhlola nokuhlola ekhaya.
Ukuhlenga futhi ukubuyisela amaKerries kubafuyi abanomthwalo wemfanelo lapho umfuyi esaziwa.
Ukuzala kwemininingwane kwi-web site.
Ngabe iSisekelo sibuyisela izinja zokutakula kubafuyi?
Yebo. Isisekelo sibuyisela izinja zokusindisa kubafuyi, uma bezimisele ukwamukela. Kodwa-ke, kunezimo lapho ukubuyisa inja yokutakula kumzabalisi kungenzeki, noma ngentshisakalo enhle yeKerry.
Isisekelo asikwazi ukubuyisa inja engenayo. Abanikazi abaningi bayenqaba ukukhulula izinja zabo ukuze Zisindiswe, bakhetha ukubeka noma ukuzithengisa izinja ngokwazo. Ngaphansi kwalezo zimo, iSisekelo sivame ukusiza laba banikazi ekubekeni iKerry ekhaya elifanele.
Abanye abanikazi bakhetha ukungabathinti abalimi ngokwabo, bacele ukuthi nathi singasenzi. Siyazihlonipha izifiso zabaninizo.
Inani eliyisimanga labaninizi abazi nokuthi ngubani ozalanisa izinja zabo, imvamisa ezimweni lapho inja indala. Abanikazi abaningi balahlekelwa amaphepha okubhalisa eminyakeni edlule, futhi abasakhumbuli isiqalo senja yenja noma nedolobha inja eyaqhamuka.
Abanye abanikazi abazitholanga amaKherries abo ngokuzalanisa. Babathole kumnikazi wezinja owedlule, okungenzeka ukuthi babethole le nja komunye umnikazi wangaphambilini, njalonjalo. Ukulandelela bonke laba banikazi bangaphambili kungabonakala kungenakwenzeka.
Umfuyi wenja obuyiselwe endaweni yokukhosela cishe akaze akhonjwe. Ama-Shelter awadedeli amagama abanikazi bangaphambili, futhi ngokuvamile awazi ukuthi kuzalwani kwenja-futhi uma bekwenza, bebengeke balukhiphe lolo lwazi.
Umfuyi wenja kungenzeka angakhonjwa kuze kube yilapho esekhululiwe nasenakekelweni, njengasesimweni sabanikazi abashonile noma abathutheliselwa emakhaya asebekhulile. Ukukhonjwa ngokushesha akwenzeki njalo.
Kuyinqubomgomo yeSisekelo ukuhlonipha nokuhlonipha amalungelo abafuyi abazimele ngokubuyisa izinja ze-Rescue kubo (i-1) lapho kukhonjwa labo bahwebi, (2) lapho umnikazi esivumile, kanye (3) lapho inja isisaphethe. Phakathi kokunye, Abahwebi abanomthwalo wemfanelo kufanele babheke ngokucophelela abathengi babo bezingane, bathengise ngezinkontileka ezibhaliwe, bahlale bexhumana nabathengi futhi babuyise izinja ezizalisayo.
Isisekelo siphinde sihloniphe futhi sihloniphe abanikazi abanomthwalo wemfanelo, amalungelo abo okuphatha impahla esemthethweni, kanye nobumfihlo babo, futhi sibeka izintshisekelo zenja kuqala. Akuhloniphi futhi akuhloniphi abafuyi abangaziphathi kahle-okufana nalabo abanamalayisense e-USDA ukukhiqiza imidlwane, labo abasebenza izinsizakalo zemidlwane noma abathengisela zona, labo abathengisela abasabalalisi / abathengisi noma izitolo zezilwane, noma labo abanomlando osunguliwe ukwenqaba ukubuyisa izinja zokuzalela kwazo.
Ngabe i-KBT Foundation isebenza kanjani namakilabhu okufuya?
Ngoba ingxoxo namakilabhu okufuya kungaba yinzuzo ekuzaleni, iSisekelo siyaqhubeka nokuhlala sivulekile kumaphrojekthi ahlanganyelwe namakilabhu okuzala njengokushicilelwa kwamapheshana, ukukhangisa ngokubambisana, nokukhulisa imali. I-USKBTC ayikaze ivuleleke noma ibambisane kunoma yiziphi izingqinamba eziphathelene neSisekelo. Eqinisweni, i-USKBTC ikhombise ubutha obuvulelekile maqondana nomsebenzi weSisekelo, noma kunjalo, lokhu kuncishisiwe eminyakeni embalwa edlule. Noma kunjalo, iwebhusayithi ye-USKBTC isakhombisa amazwana adelelayo mayelana neSisekelo. Amalungu amaningi ekilabhu, njengabantu, asebenze ngokubambisana neSisekelo ukusiza ama-Kerrries oswele.
Isisekelo siyaqhubeka nokuthemba ukubambisana ne-USKBTC namanye amaklabhu endawo ezindabeni ezithinta kakhulu.
Luhlungwa kanjani Uhlu Lwezindaba lwe-KB-L?
Uhlu Lwezindaba lwe-KB-L lunemithetho ethile elawula ubulungu nokuthumela kwemiyalezo ohlwini. Imithetho yohlu ye-KB-L ayihlukile futhi isetshenziswa ngendlela efanayo ezinhlwini eziningi zezindaba emhlabeni wonke. Ngenkathi imithetho eshicilelwe ichazwe kabanzi, konke kungumqondo ojwayelekile: akukho ukuhlaselwa komuntu noma ukuhlaselwa ku-Sisekelo, imilayezo kuphela ehlobene neKerries, akukho okuthunyelwe okuthengiswayo, futhi akukho limi olungamanyala. Njengakwezinhlu ezikhethiwe kakhulu, umongameli wengamela uhlu lwezindaba. Endabeni ye-KB-L, ngaphandle komyalezo wokuqala, imilayezo AKUFUNI kubuyekezwe umongameli ngaphambi kokuthi ithunyelwe. Lapho obhalisile ephula imithetho eshicilelwe, umongameli unezinketho eziningi. Angadinga ukuthi lowo muntu amhambise okuthunyelwe kumengameli ngaphambi kokuthi athunyelwe ukuze bonke babone ("ngokubukezwa"). Noma, ezimweni ezinzima, angavimba lowo obhalisile ohlwini noma acele uLsoft ukuthi amvimbele kuzo zonke izinhlu zohlu.
Ukubhaliswa kwe-KB-L kuyilungelo, hhayi ilungelo.
Isisekelo ngubani olandisa?
Isisekelo singaba khona ngokusekelwa ngumphakathi wakwaKerry. Wonke umuntu angaba ngumxhasi, kepha ngaphandle kwakho - umphakathi wakwaKerry-Isisekelo awunakuba khona. Ngakho-ke, iSisekelo siyaphendula emphakathini waseKerry. Ngakolunye uhlangothi, amaklabhu ezalanisa, alandisa kumalungu akhokha imali, futhi ngenxa yalokho azovikela amalungu awo futhi abeke “amalungelo” abafuyi kuqala, kunokuphikisana nokuvikela nokuvikela uKerries nabanikazi bawo ababhekele. Isisekelo ngaso sonke isikhathi sibeka izintshisekelo zezinja kuqala.
Eminye imibuzo? Xhumana nathi! Siyajabula ukuphendula noma imiphi imibuzo ongaba nayo @:
Amalungu angathumela i-imeyili:
Ungashayela nezinombolo zethu zocingo ezingenazisebenzi futhi ushiye umyalezo:
Sizobuyela kuwe ngokushesha okukhulu uma sesibukeze umyalezo wakho futhi sawudlulisela ephathini ye-appropraite.
Imibhalo engenzi inzuzo
Umphathi wokuqukethwe kweWebhu
Umqondisi Wezempilo Nezakhi Zofuzo
I-Fundraising & Marketing D irector
Izinqolobane Zokugcina Bheka konke okuthunyelwe kwesisekelo bese usesha okugciniwe
Thola imininingwane eminingi ngomphakathi wethu we-KTBF ngokuvakashela ikhasi lethu lasekhaya lomphakathi
Izindaba Eziyisisekelo nezibuyekezo
The Kerry Blue Terrier Foundation cishe i-100% isekelwa ngabantu abanjengawe. Ukudalulwa ngokuphelele kwezimali zethu kuyilungelo lakho nesibopho sethu. Isisekelo siqhutshwa amavolontiya; akekho othola iholo. Umholo wethu wonke we-2017 wawungu- $ 22,719 kanye nezindleko zethu
February 10, 2018	Awekho amazwana
Ibhodi leSisekelo selinqume ukuyeka iphephandaba eliphuma njalo ngekota.? Ngemuva kweminyaka engu-13 yokuhambisa amaphephandaba, iSisekelo sesishintshele kwabezindaba ze-elekthronikhi.
Ibhodi leSisekelo linqume ukuyeka incwadi yezindaba ephume njalo ngekota. Ngemuva kweminyaka engu-13 yokuhambisa amaphephandaba, iSisekelo sesishintshele kwabezindaba ze-elekthronikhi.
August 13, 2015	Awekho amazwana
Ezezimali & Amaminithi
Ukugxila okuyinhloko ukugxila kweKerry Blue Terriers nokubekwa kwabo emizini enothando emhlabeni wonke.
Ukusindisa ikhasi eliyisiqalo
Kunzima ngokwanele ukubalekela ubuhlobo obuhlukumezayo ngokwakho. Izithiyo ziba zinkulu ngokwengeziwe lapho kuhileleka inja ethandekayo. Kepha izindlela zokusiza ziyakhula. Izibalo ziyazikhulumela. Amaphesenti angamashumi ayisikhombisa nambili abesifazane abanezilwane ezifuywayo abathola ukuphepha embikweni wokuhlala wabesifazane ukuthi
July 24, 2018	Awekho amazwana
[Isici esifakiwe: UValerie kanye nengane yaseCalifornia.] Inothi lomhleli: Le ndaba elandelayo iyisibonelo semihlobo emibili yemizamo eyingxenye yemisebenzi yokutakula iSisekelo kodwa ayisiyindlela enhle yokuhlangula?? Okusho ukuthi, izinja azitholakalanga ezindaweni zokugcina izilwane noma ezitolo zezilwane
Ngithole le imeyili ngivela kuBetty ngasekupheleni konyaka owedlule. Unginike imvume yakhe yokuthi ngiyishicilele futhi nginikeze imiphumela yokusindisa kwe-KBT kwakamuva,? Ngicabange ukuthi leli kungaba yithuba elifanele? Ngiyabonga, Betty,? Ngokuhlenga uRaquel futhi wamfaka empilweni yakho
January 23, 2018	Awekho amazwana
Izindaba Zokusinda Eziningi